Koorso bilaash ah oo aan ahayn AutoCAD - Geofumadas
Febraayo, 2011 AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS, Video
Waxbarashada AutoCAD ma ahan marmarsiiyo waqtiyadan isku xirnaanta. Hada waxaa suurtagal ah in la helo buugyada leh fiidiyowyo gebi ahaanba bilaash ah. Doorashadan oo aan ku tusi doono inaad tahay midka ugu fiican ee lagu baran karo AutoCAD si fudud.
Tani waa shaqada Luis Manuel González Nava, oo ah buug daabacan oo ah buug daabacan oo ah bogagga 565 iyo laba cajalado iyo hadda waxaa laga heli karaa mashruuca AulaClic. Nidaamka waxaa ka mid ah qaybaha sharraxaadda, fikradaha iyo sawirada kuwaas oo dhameystiraya barashada fiidiyowga lagu duubo YouTube-ka oo leh cod iyo dhawaaqyo ka baxsan wixii aan fileyn karno. Inkasta oo ay ku xirantahay interface-ka hore ee AutoCAD 2009, wax qiimo leh ayaa ku jira qaabka, sababtoo ah amarradan waa isku mid.
Hadda waxa gebi ahaanba bilaash ah, inta ay online arki ka AulaClic. Waxaa lagu talinayaa in ay daawadaan videos, mid mid, oo aan quusan in ay fahmaan aragti buuxda ee wixii nidaamka markaas iibsiga karaa waxyaabaha ku qoran. Tallaabada xigta ayaa laga yaabaa in ay isku dayaan in ay qabtaan shaqooyin lamid video ah, joojiyo haddii loo baahdo, iyo dhaqdhaqaaq hubaal afar maalmood qof midkood quduuska qudhiisu barnaamijka baro karin sida haddii ay ahaan jirtay (ama ka fiican) marka loo eego haddii uu ahaa in saacadood 60 dabcan.
Qaybta guud ee content waxaa loo kala soocayaa qaybaha 41 oo laga arki karo Heerka Waaweyn. Waxaa sidoo kale jira sawir-qaadis cajalad fiidiyo leh isla lambar. Tani waa muujinta fiidiyoowga.
1 Maxay tahay AutoCAD?
2. Muuqaalka muuqaalka (1 | 2)
4. Qodobbada Muhiimka ah
5. Joometiriga waxyaabaha aasaasiga ah
6. Geometri ee walxaha isku dhafan
7. Qalabka guryaha
8. Qoraalka (1 | 2)
9. Tixraaca arrimaha
10. Nidaamka raadinta tixraaca
11. Raadinta Polar
13. Maareynta Maareynta
14. Nidaamka isku-duwista shakhsi ahaaneed
15. Habka fududeynta (1a | 1b | 2 | 3a | 3b)
16. Heerka Sare (1 | 2)
18. Qaababka Shading (1 | 2)
19. Daaqadda guryaha
20. Daboolka (1 | 2 | 3)
22. Tixraacyo dibedda ah
23. Xarunta Fududeynta
26. CAD Qiyaasaha
27. Qoris Qorshe (1 | 2)
28. Daabacidda Goobaha
29 AutoCAD iyo Internet (1 | 2)
30. Qorshayaasha qorshaha
31. Meelaha «Muujinta 3D»
32. Nidaamka isuduwidda ee 3D (1 | 2)
33. Waxyaabaha Eegida 3D (1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b)
34. Waxyaabaha fudud ee 3D (1 | 2 | 3 | 4)
36. Muuqaal muuqaal ah
37. Qalabka (1a | 1b | 2 | 3 | 4a | 4b)
38. Soo bandhigid (1 | 2 | 3 | 4)
40 InterContent 2009 (1 | 2)
41 Maxay ku cusub tahay AutoCAD 2009 (1 | 2)
Hoos waxaan ku tusayaa tusaale ahaan fiidiyowyada, sida aad arki doonto, waxay leeyihiin sharraxaad ma aha oo kaliya hawlaha barnaamijka laakiin sidoo kale fikradaha iyo u-habeynta kartoonada caadiga ah. Tani waa qeybta daabacaadda, mid ka mid ah mawduucyada ugu adag ee koorsooyinka AutoCAD.
Sidaa darteed haddii aad rabto inaad barato AutoCAD, bilaash iyo fiidiyoow, tani waxay noqon kartaa habka ugu wanaagsan. Waa habboon in la ogaado, maaddaama kooraskan horeba uu yahay waxaa loo dhisay AutoCAD 2012.
Tag koorsada AutoCAD.
Post Previous«Previous Sidee loo ogaadaa marka Google uu soo rogo sawirada meel
Post Next gvSIG Fonsagua, GIS ee naqshadaha biyahaNext »
4 Jawaab ah "Kursi AutoCAD bilaash ah"
José F. Santos V. isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan xiiseynayaa koorsada autocad ee 2013
DUGSIYADA HAWEENKA 2012 IN 2000 VIDEOS KA HELI KARO
Hello Manuel, waad ku mahadsan tahay xiriirka cusub, waxaanu isha ku hayn doonaa shaqadaada.
Salaan iyo hambalyo.
Waad ku mahadsantihiin mawduucan iyo faallooyinka. Waxaan kuu sheegi doonaa in aan cusbooneysiinayo koorsada barnaamijka 2012 ee barnaamijka. Horumarka horumarintiisa ayaa laga arki karaa http://www.guiasinmediatas.com waxaana rajeyneynaa in marka la dhammeeyo waxaa sidoo kale laga heli doonaa aulaclic.